Dahabshiil oo beenisay hadalka Xisaabiyihii gobolka Mudug
BOOSAASO, Puntland - Shirkadda Dahabshiil ayaa beenisay qoraal baraha bulshada lasoo dhigay, oo ku saabsan in Wasiirka Maaliyadda Puntland Cabdiqaadir Saciid Caarshe uu account uga furan yahay Laanta magaalada Qardho.
Qoraalka kasoo baxay Dahabshiil, oo uu ku saxiixan yahay C/xakiim Maxamuu Xasan, oo ah ku simaha maamulaha ee xarunta Boosaaso ayaa lagu sheegay in warqadda la baahiyay 24-kii bishan ay tahay mid la been abuuray, oo aan waxba ka jirin.
War Saxaafadeedkan oo nuqul kamid ah lasoo gaarsiiyay Warsidaha Garowe Online ayaa lagu xaqiijiyay in aysan jirin Account numberkiisu yahay QRD00412 oo shirkadda Bangigeeda qof uga furan yahay guud ahaan dalka.
Laamaha amaanka ee dowladda Puntland ayaa looga dalbaday qoraalka inay la xisaabtaan islamarkaana ay tallaabo ka qaadaan cida sida sharci darrada ah u isticmaashay Loogada iyo Astaanta Shirkadda Dahabshiil.
Ugu dambeyn, Dahaabshiil waxay ku sheegtay War-saxaafadeedka ay soo saartay in xogta macaamiisheeda iyo lacagtoodda ay tahay "mid gacan amaan ah ku jira", waxaana loogu baaqay inay ka murug la'adaan, aysana dhag jalaqsan usiinin qoraalka beenta ah ee la faafiyay.
Beeninta Dababshiil ayaa ka dambeysay markii Xisaabiyihii gobolka Mudug Barkhadle Aadan Muuse, uu usoo bandhigay Saxaafadda warqad [Bank Statement], oo uu ku sheegay inay yahay lacagta Wasiirka Maaliyadda Puntland ugu jirta Account-ka uu ku leeyahay Dababshiil.
Barkhadle ayaa ku eedeeyay Caarshe in lacago uu musuq-maasuqay uu ku shubtay Account-kiisa Dahabshiil, iyadoo warqadda ay ka muuqdeen magacyo uu sheegay inay yihiin shaqsiyaadka lacagta ku shubay. [Halkan ka akhri Warka].
Laakiin, Wasiirka Maaliyadda Puntland, oo dhankiisa ka jawaabay eedayaha Xisaabiyaha ayaa gaashaanka ku dhuftay, wuxuuna carabka ku adkeeyay in qudhiisa ay ku maqan tahay Xisaabiyahay aduun lacageed dhan 99 Milyan oo Dollar-ka Mareykanka ah.
HOOS KA AKHRI QORAALKA DAHABSHIIL:
Puntland: Xisaabiyihii Mudug oo la amray in lasoo xiro [DAAWO]
Puntland 30.06.2018. 17:38
Xisaabiyaha ayaa dhawaan shaaciyay in Wasiirka Maaliyadda Puntland uu musuq-maasuqay...
Puntland: Xisaabiye kashifay Musuq-maasuqa maamulka Cabdiweli Gaas [DAAWO]
Puntland 24.06.2018. 18:47
Dahabshiil oo beenisay in Somaliland ku taageerto dagaalka Puntland
Puntland 17.06.2018. 18:12
​Puntland oo gubtay Lacag ka badan 600 Malyan
Puntland 12.10.2017. 15:28
Puntland: Caarshe oo ka jawaabey eedaymo loo soo jeediyay [DAAWO]
Puntland 24.06.2018. 23:58
Masar oo ka taageeraysa Puntland tayaynta garsoorka iyo amaanka
Puntland 23.04.2019. 23:34
Maxaa kasoo baxay kulankii su'aallaha lagu waydiiyay Goodax Barre?
Soomaliya 20.04.2019. 15:41
Madaxii degaanka Oromada oo loo magacaabay wasiirka difaaca
Afrika 18.04.2019. 10:27